Ukulungiswa kwetanki yentlanzi | Ngeentlanzi
Ukuma komhlaba yindlela yokuhombisa uze wahlule izithuba kwiitanki zentlanzi. Yindlela yokuhombisa esinokuthi sithathe isigqibo ngayo ngento nganye esifuna ukuyifaka kwitanki lethu leentlanzi, nokuba zithe tyaba, amatye, amaqokobhe okanye ezinye iinkcukacha.
Kule ndawo Uya kuba nakho ukwazi ngcono ukuba kubandakanya ntoni eli hlabathi lokuhombisa umhlaba ngaphakathi kwendawo yentlanzi, ethi, nangona inokubonakala ngathi ayichanekanga kwigama layo, isenokuvakala ingekhoyo. Kodwa kuluqeqesho kwindawo enkulu kakhulu okanye kumakhaya apho sinokuba namatanki amakhulu okuloba kunokuba luncedo kakhulu.
Ulwazi oluncinci alonzakalisi, Yonwabele indawo kwaye ungalibali ukuba kuhlala kulungile ukwazi kakuhle izinto kunye nezihloko esinomdla kuzo.
Ukuba unesitiya kwaye unendawo yamachibi amanzi, ngokuqinisekileyo ungathanda ukuba nentlanzi apho kunokuba ...
I-biotope aquarium yenye apho siphinda sisebenzise i-ecosystem ukuze iintlanzi kunye nezityalo zikhule kwaye ...
Xa ukuhombisa kunye nokubandakanya izinto eziza kuba yinxalenye yendawo yokuhlala i-aquarium kufuneka sisebenzise ...
por Encarni yenzayo 11 iminyaka .
Xa uhombisa i-aquarium, bubuntu bayo nganye obuchaphazelayo kuba ...